ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်များ - Hello Sayarwon
အခြေခံကျန်းမာရေး » အခြေခံကျသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ
ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်များ
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် အောက်တိုဘာ 19, 2020 .2mins read
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပူချိန် (Body Temperature) ဟာ လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ဖော်ပြပေးနိုင်တယ်လို့ လူသိများပါတယ်။ တကယ်တော့ Body Temperature ဆိုတာဟာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။
သူ့မှာ ဒီထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ Body Temperature ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်တွေကို ဗဟုသုတအဖြစ် ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
သာမာန် အပူချိန်ဆိုတာ ဘာလဲ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ သာမန်အပူချိန်ကို ၉၈.၉ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်လို့ သတ်မှတ်ထားကြောင်း U.S. National Library of Medicine ကဆိုထားပါတယ်။ ၉၇ နဲ့ ၉၉ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်အကြားပမာဏကို ပုံမှန်အပူချိန်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်အပူချိန်ဟာ ရာသီဥတု၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နဲ့ အချိန်ကာလတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးလည်း ပြောင်းလဲနေနိုင်တာကိုလည်း မမေ့သင့်ပါဘူး။
လူတစ်ယောက် နာဖျားတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပူချိန်ဟာ မြင့်တက်လာပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် ၁၀၀.၄ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ထက်ပိုရင် ဖျားတယ်လို့ မှတ်ယူပါတယ်။ နာဖျားတဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ်ပူချိန်မြင့်တက်တာအပြင်
တစ်ကိုယ်လုံးအားနည်းတာမျိုး လက္ခဏာတွေလည်း ပြသတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူကြီးတွေနဲ့ ငယ်ရွယ်နုနယ်လွန်းတဲ့ ကလေးတွေအကြား မတူညီတဲ့အချက်က လူကြီးတွေမှာ ကိုယ်ပူချိန်မြင့်မားလွန်းတာဟာ ဖျားနာတာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။
ကိုယ်ပူချိန်တက်ပြီး ဖျားတိုင်း မကောင်းတာမဟုတ်ပါ
Mayo Clinic ရဲ့ အဆိုအရ ကိုယ်ပူချိန်တက်ပြီး ဖျားခြင်းကို တိုက်ထုတ်နိုင်တာက ကောင်းတဲ့အချက်လို့ဆိုထားပါတယ်။ အဖျားကိုတင်မက ကူးစက်ရောဂါတေါွကို တိုက်ထုတ်နိုင်အောင် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို လေ့ကျင့်ပေးသလိုဖြစ်စေတာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
COVID-19 ရောဂါရှိမရှိသိရအောင် ကနဦးအားဖြင့် ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းကြပါတယ်။ ကိုဗစ်ဝေဒနာရှင်တချို့ဟာ ဖျားနာတတ်ကြတာကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် COIVD-19 ရဲ့ လက္ခဏာတွေမှာ ဖျားနာတာဟာ လက္ခဏာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ချောင်းဆိုးတာ၊ အနံပျောက်တာနဲ့ ဘာလက္ခဏာမှမပြတာတွေကလည်း အဓိက လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း မမေ့သင့်ပါဘူး။ အမေရိကန် CDC ကတော့ ကိုယ်ပူချိန်တိုင်းတာကို အားပေးထားပြီး တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်တိုင်းတာဖို့နဲ့ ၁၀၀.၄ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ထက် နည်းနေဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုထားပါရဲ့။
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဟာ ပိုပြီးကျဆင်းလာတတ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာလေလေ ကျဆင်းနှုန်းပိုများလေလေပါပဲ။ အသက် ၇၄ နဲ့ အသက် ၈၅ အကြားမှာတောင် တော်တော်လေး ကွာဟချက်ကြီးပါတယ်။ အသက် ၈၅ အထက် လူကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်အပူချိန်ဟာ ၉၃.၅ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်အထိ ကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်။
မိန်းမနဲ့ ယောင်္ကျားကိုယ်အပူချိန် မတူဘူး
အင်္ဂလိပ် စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။ “အေးစက်တဲ့လက်နဲ့ နွေးထွေးတဲ့နှလုံးသား” ဆိုပြီးပေါ့။ အမျိုးသမီးတွေကို ရည်ရွယ်ပြောဆိုတာပါ။ Lancet ရဲ့ သုတေသနပြုချက်အရ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် ပျမ်းမျှ ကိုယ်အပူချိန် ဝ.၄ ဒီဂရီလောက် ပိုမြင့်တတ်ပါတယ်တဲ့။ တစ်ကိုယ်လုံးကိုခြုံငုံပြောတာပါ။ လက်ချည်းပဲတိုင်းတာမယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လက်အပူချိန်ဟာ အမျိုးသားတွေထက် ၂.၈ ဒီဂရီအထိပိုပူပါတယ်။
ဦးထုပ်ဆောင်းရင် အပူဒါဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး
အပြင်သွားချိန် ဦးထုပ်ဆောင်းသွားရင် အပူဒါဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာက တကယ်တမ်းတော့ အတိအကျမှန်ကန်မှုမရှိပါဘူး။ ဦးထုပ်ကြောင့် မျက်နှာနဲ့ဦးခေါင်းကို UV ဓာတ်ကနေသာကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ အပူဒါဏ်ကိုတော့ မကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ BMJ ဆေးဝါးဂျာနယ်က လေ့လာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
“ Pinocchio effect” လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရုပ်သေးရုပ်ကလေး ပီနိုခီယိုဟာ လိမ်ပြောတိုင်း နှာခေါင်းရှည်ရှည်ထွက်လာသလိုပေါ့။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တုန်းက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနတွေအရဆိုရင် လူတွေဟာလိမ်ပြောလိုက်တဲ့ အခါတိုင်း ကိုယ်အပူချိန် ပိုပိုကျဆင်းလာတတ်ပါတယ်တဲ့။ အထူးသဖြင့် နှာခေါင်းတစ်ဝိုက်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် နဖူးတဝိုက်မှာတော့ ပိုတိုးသွားပါတယ်တဲ့ဗျာ။
ငရုပ်သီးနဲ့ ငရုပ်ကောင်းဟာ ကိုယ်အပူချိန်ကို မြင့်စေတယ်
အစပ်တွေစားရင် ပူတာစပ်တာတင်မက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မူလအပူချိန်ကိုပါ တိုးသွားစေတတ်တာပါ။ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း အစပ်စားတာဟာ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်တဲ့။
အေးမြတဲ့နှလုံးဟာ ဦးနှောက်ကို ကျန်းမာစေတယ်
Therapeutic hypothermia ဆိုတဲ့ ကုထုံးက နှလုံးကို တည်ငြိမ်အေးဆေးစေတဲ့ ကုထုံးတစ်မျိုးပါ။ ဒီလို နှလုံးကို အေးချမ်းစေတာက ဦးနှောက်ကိုလည်း အကျိုးရှိစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းဖို့လိုတယ်လို့ ရှေးလူကြီးသူမတွေက ဆုံးမကြတာ ဒီသဘောတရားကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်က သေမယ့်အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ်
လူတစ်ယောက်က သေဆုံးခါနီးအချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အပူထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းချင်း ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက အေးစက်လာတတ်တာပါ။ ဒါကို လက်တင်ဘာသာနဲ့ Algor Mortis (The coldness of death) လို့ ဆိုတာပါ။ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာချက်တွေအရဆိုရင် လူတွေ သေဆုံးခါနီး ဒါမှမဟုတ် ရောဂါပြင်းထန်လာချိန်မှာ ကိုယ်အပူချိန် ကျဆင်းလာတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိထားတာပါ။
သာမိုမီတာ နဲ့ ကိုယ်အပူချိန် ဘယ်လိုတိုင်းကြမလဲ။
ခွေးကြောက်တဲ့ စိတ်ရောဂါ (Cynophobia) ဆိုလို့ ထူးဆန်းသွားလား..... ခွေးက လူသားတွေအတွက် သစ္စာအရှိဆုံး မိတ်ဆွေပါ။ ဒါပေမယ့် ခွေးတွေကို ......
စိတ်ကျန်းမာရေး, အစိုးရိမ်လွန်ခြင်းနှင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းများ စက်တင်ဘာ 9, 2021 .2mins read
Eye Sunburn နေပူရှိန်ပြင်းပြင်းထဲ အချိန်အကြာကြီး ရပ်နေမိရင် မျက်လုံးတွေ ပြာဝေပြီး မူးသလိုလို မော်သလိုလို ဖြစ်လာတာကို Eye Sunburn လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မျက်စိကျန်းမာရေး, အခြားမျက်လုံးပြဿနာများ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 22, 2021 .2mins read
HIV ပိုးရှိသူတွေ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရလား
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 16, 2021 .2mins read